Namhlanje, wonke umntu ongelivi uthetha ngezibonelelo zama-antioxidants kunye nenzakalo ye-radicals yamahhala. Nangona kunjalo, ngokwenene, bambalwa kakhulu abantu abazi ukuba ngaba yintoni na aba baxhasi be-antioxidants, ukuba kutheni sifuna nabo kunye nokuba bafuna kuphi, kunye nabani abakhululekile kunye neyingozi kangakanani. Ngaphambi kokuba uthethe ngeendawo ezixhamlayo ze-antioxidants, kubalulekile ukucacisa: zeziphi ii-antioxidants ezikhululekileyo zamahhala kwaye kutheni zikhululekile?
I-radical ngoku ibizwa ngokuba yi-athomu okanye iqela lee-athomu elinomnxeba ongenalutho. Ngaloo maqabunga kubalulekile ukwazi oku kulandelayo: bangasebenza kwaye bazinzile. Kwi-antioxidants esebenzayo kunye ne-radicals yamahhala, iimpendulo zetanga ziphawu. Umzekelo, iperoxide, okanye i-peroxide oxidation ye lipids. Njengomphumo we-peroxide oxidation ye lipids, apho iimbumba zesebe zakhiwa, i-hydroperoxides eyingozi iyenzelwa umzimba. Iyiphi indima eyenziwa yi-antioxidants? Badibana nama-radicals asebenzayo kwaye banqamle inkqubo yekhenketho ye-peroxidation. Kule meko, i-molecule ye-antioxidant iba yinto eqinile. Siyabulela kukuzinza kwe-particle apho i-antioxidant iguqulwa ukuba ikhetho liphule.
I-oksijini engaphezulu kwimizimba. Inani le-oksijeni emoyeni li malunga nama-21%. Kwaye ukunyuka okuncinci kwenkxalabo kuya kuba nzima kumzimba. Nangona i-ozone, enyanisweni, ukuguqulwa kwe-oksijeni, ekhusela bonke ubomi kwimimangaliso ye-UV, ingaba yingozi.
Ukutyhefuza ngeentshefu. Hayi, ukungcola kwendalo yenzekile. I-Mercury yinkompo yamanzi. Kwaye i-fumes ye-mercury enetyhefu. Kwaye kunobungozi ngakumbi izinto ezivela kwi-mercury. I-Mercury kunye namaqumrhu ayo angaqhelekanga, asetyenziswa ngokubanzi kumashishini amaninzi, kunye nokuthuthwa kwamanzi kwamanzi okuwa phantsi kwamanzi.
UV-Ray. Ngakolunye uhlangothi, luncedo kwaye luyimfuneko emzimbeni wethu, phantsi kwezenzo zawo emzimbeni, i-vitamin D iyakhiwa. Oogqirha bancoma amakamelo okupholisa ukuba "makungene" kwi-ultraviolet ewusizo endlwini, kuba inezixhobo ezixhatshazwayo. Kwaye kwangexesha elifanayo ngaphantsi kwefuthe le-radicals yama-ultraviolet yamahhala. I-solarium inobungozi.
Xa ufumene i-tan enhle , unokuguga ngaphambi kwexesha.
Flavonoids. Kukho amaqela alishumi e-flavonoids, ezintlanu zazo ezingenambala, umzekelo, iekatekini. Ziyakwenza lula zikhuphe kwaye zitshintshe umbala. Amaqela amahlanu e-flavonoids anemibala, ezi ziqabunga zamagqabi, iintyatyambo, iziqhamo, amajikijolo.
I-Vitamin E. Ngenye yezona zinto ezinamandla kakhulu zendalo. Ngoku i-vitamin E iyakongezwa phantse yonke i-creams. Ngendlela, i-antioxidants yokufakelwa i-analogue ye-vitamin E.
Coenzyme Q okanye u-ubiquinone. Kwakhona mhlawumbi iqela eliqhelekileyo lama-creams. Coenzyme Q10 yaziwa kakhulu. Le vithamini ikhona kuzo zonke iiseli zomzimba wethu. Kuze kube kutshanje, izazinzulu zathetha ngokuphindaphindiweyo malunga nomsebenzi we-antioxidant we-vitamin E. Kwakukho ukuba i-ubiquinone nayo i-antioxidant enamandla kakhulu.
I-Vitamin C. Ngamanani amancinci, kwakhona, i-antioxidant.
Hormone zeSteroid. Kuvela ukuba ama hormone ethu athatha inxaxheba ekukhuselweni komzimba we-antioxidant.
IHormone thyroxine. Le hormone iveliswa yi-thyroid gland kwaye ine-iodine. Ngako oko, ukuba ne-thyroxine kwifa lethu, iodode iyadingeka.
Selenium. Kwakhona kubalulekile. I-Selenium yincenye ye-enzyme, ebonisa iipropati ze-antioxidant.
Amino acids kunye ne glutathione. Ama-amino acids ayingxenye yeenzyme. Futhi i-methionine iyimfuneko yaminodi, oko kukuthi, umzimba awukwazi ukuvelisa. Ngenxa yoko, ekudleni kwethu kufuneka kube yimveliso equkethe i-methionine.
Ukuguga - i-alas - le nkqubo inokuphepheka. Ichaphazela indlela yokuphila, imikhwa emibi, ukondla. Kwiminyaka emashumi edlulileyo, iingcamango ezingama-200 kunye neengcamango zokuguga ziye zacetyiswa. Enye yeendawo zokuqala phakathi kwabo yintetho yamahhala. Ukuhlanganiswa kwemveliso ye-peroxidation kunye ne-radicals yamahhala kunciphisa umsebenzi wee-enzyme, ukuphazamisa umsebenzi weembrane zeseli, obangela ukugqithisa kwe-pigment - lipofuscin - kwiiseli. Le pigment iyinkimbinkimbi ye-fat oxidized acids eneprotheni. Ukongezelela, i-degree ephezulu ye-acids kunye ne-oxidation ephezulu, ngakumbi i-pigment yobudala. Ngexesha elifanayo kunye nobudala, umsebenzi wee-enzyme ezilwa neenkqubo eziwonakalisayo, kunye nezinye izinto ezikhuselayo ziyancipha. Ngenxa yoko, umzimba ufuna ukhuseleko olongezelelweyo.
Kukho ubungqina bokuba ama-antioxidants anciphisa umphumo we-carcinogens. Kwaye kunye neenkqubo ezikhululekile, ngokulandelanayo, negalelo ekuphuhlisweni komhlaza. Idata abaphandi abayifumanayo iyaphikisana kakhulu. Nangona kunjalo, ukuba i-carcinogens isebenza emzimbeni ixesha elide, iziphumo ziya kubonakala. Kwaye apha, indima ebaluleke kakhulu idlaliswa yinto esiyidlayo kunye nendlela ukutya kuphekwe ngayo. Ukutya okunempilo kunye nokupheka ngokufanelekileyo kuyaluncedo kuwo wonke umntu. Xa kukhwa, amafutha afumaneke kwimveliso ngokuqhelekileyo ayatshisa ku-160-200 ° C, kwaye ngaphezulu.
Enyanisweni, kule bushushu, kwanezixhobo ezinamafutha angasetyenzisiweyo ezi-fatty oxidized and converted into forms that are to health. Ngako oko, indlela efanelekileyo yokucwangcisa ukutya i-steaming. Kwaye kunye neoyile yemifuno, eyiluncedo kakhulu emzimbeni wethu, kufuneka isetyenziswe ukugqoka iisaladi. Nsuku zonke, okanye ngamaxesha amaninzi ngosuku, sidla okuthosiweyo. Cinga ngako. Akunzima ukuphoqa ukuba udle inyama ebilisiwe kunye nekholifulawa ephekwe isibini, kodwa kuyafaneleka.
I-Antioxidants iyingxenye yemveliso yezonyango. Kodwa oku akwaneleyo. Emva kwakho konke, ama-radicals ahlaselayo ahlasele umzimba wonke, kwaye kungekhona nje iminyaka yobudala. Ukutya kubaluleke kakhulu.
I-Vitamin E ifumaneka kwioli yemifuno: i-sunflower, umnquma, ingqolowa kunye nabanye. Kwakhona, i-vitamin E isisityebi segciwane lengqolowa. Ngoko ke, kungcono ukudla isonka kwisidlo sokugaya okanye nge-bran. Ngokuphathelele inani elikhulu le-carbohydrate kwimveliso yefubha. Kusuka kwelinye okanye ezimbini kwiintlanzi zesonka ziya kuba zilunge ngakumbi kunengozi. Kungcono ukudla iigwele ezingaphantsi kunye nezinye iiswidi.
Flavonoids. Imithombo ye-flavonoids yimifuno neziqhamo, umzekelo, i-artichokes. ICatechin ifakwe kwi-cocoa. Ngoko ke, kungcono ukukhetha i-tshokoleta embi kunokuba ubisi ushokoledi.
I-Selenium inokufumaneka kwiikonkco, i-pistachios, igalikhi.
Uninzi lwawo wonke iodine lufumaneka elwandle kale, nakwezinye ivenkile.
Ubihinon ifunyanwa yonke indawo. Ngendlela, ukusuka kwi-lat. ubizo - yonke indawo, yonke indawo. Ngoko ke, kunzima ukuthetha malunga nokusilela kwe-coenzyme Q.
Imithombo ye-amino acids iiprotheni. Musa ukuyeka inyama kunye nesobho. Ngenxa yokuba kubalulekile amino acids eziyimfuneko kumzimba wethu, umzekelo, i-lysine. Le nino-amino acid itholakala kuphela emathanjeni nasemathambo.
Ukuphulukiswa kunye nemilingo ye-rose quartz
Ilayisi nenkukhu kwi-multivariate: kulula kwaye ilungile
UMaxim Vitorgan ugxininiswe ngokupheleleyo ngenxa yentengiso, ifoto
Yakha umoya ophilileyo endlwini
I-Pasta kunye nemifuno eboyiweyo kunye ne-basil
Isaladi yemifuno edibeneyo